के बन्छत् मंगलमको सिक्वेल ? | के बन्छत् मंगलमको सिक्वेल ? – हिपमत
के बन्छत् मंगलमको सिक्वेल ?
निर्देशक नवल नेपालले मंगलवार दिउँसो फेसबुकमा ‘मंगलम’ लेख्दै पुष्प खड्का र शिल्पा पोखरेलका केही पुराना तस्विरहरु साझेदार गरे । उनले फिल्मको सिक्वेल बन्नेतर्फ संकेत गरेको कतिपयको बुझाई छ । उनी पनि दर्शकबाट प्राप्त प्रतिक्रियाले सिक्वेल बनाउनु पर्छ कि भन्ने सोचमा भने पुगेका छन् । तर, अहिलेसम्म यसबारेमा कुनै पनि निर्णय नभइसकेको उनले जानकारी दिए।
उनले भने- ‘हल र यूट्युबबाट आएको भाइब्रेटले एकखालको उर्जा भने दिएको छ । नेपालमा पारिवारिक ड्रामालाई स्वीकार गर्ने जुन चलन छ, त्यसलाई हेर्दा सिक्वेल बनाउनु पर्छ कि भन्ने चाहिँ लागेको हो । छवि बा (ओझा) सिक्वेल बनाउन तयार देखिनु भएको छ । पुष्प खड्का पनि सिक्वेल बनाउने कुरामा सकारात्मक हुनुहुन्छ रे । सबै कुरा सोचे जस्तो भयो भने सिक्वेल बन्न पनि सक्छ ।’
‘सिक्वेल बन्ने अवस्था आयो भने पुरानै स्टारकास्ट (शिल्पा पोखरेल) दोहोर्‍याउन समस्या होला नी त ?’ । संसारमा सबै कुरा सहमति र सहकार्यमा हुने गर्छ । यसमानेमा स्टारकास्टमा समस्या आउँदैन । सिक्वेल बन्ने अवस्था आयो भने सबैजना बसेर सल्लाह र सहमति गर्ने छौं । यो ठूलो कुरा हो जस्तो लाग्दैन ।’